JIRAMA: Notendrena ho Tale jeneraly i Andriamanga Vonjy
jeudi, 19 décembre 2019 08:05
Nesorina tsy ho minisitry ny angovo, rano ary akoran'afo tao amin’ny governemanta Ntsay Christian izy taorian’ny krizin-tsolika ny volana septrambra 2019, notendrena nandritra ny Filankevitry ny minisitra omaly alarobia 18 desambra ho Tale Jeneraly i Andriamanga Vonjy.
Ny « cabinet de recrutement » kanadiana SG Group INC no nisahana ny fifantenana izay ho Tale jeneraly. Andriamanga Vonjy no nivoaka tao anaty sivana.
Minisitra nivangogoan’ny olana i Andriamanga Vonjy tao anatin’izay sivy volana naha tao anatin’ny governemanta Ntsay Christian azy izay. Fako (SAMVA) tsy voataona mankeny Andralanitra, jiro mipendrapendrana sy tapaka lava, rano tsy isitrahan’ny ankamaroan’ny Malagasy, eny na ireo mponin’Antananarivo sy ny manodidina akaiky ny foibem-pamokarana efa misy aza, farany teo ny fikorontanan’ny fitsinjarana solika.
Misy ihany ireo vava asa natombok’i Andriamanga Vonjy, na amin’ny famahana olana ny famatsiana rano toy ny etsy Amoron’Akona, eny Itaosy, ao Antsirabe, Ambatondrazaka… fa tsy mbola hita mivaingana ny vokatra, hany ka nesorina ihany ny tenany fa mandratsy laza ny fitondran’i filoha Andry Rajoelina.
Andriamanga Vonjy no minisitra sahy nanasazy mpandraharaha vahiny, izay tompon’ireo kaompanian-tsolika lehibe miasa eto Madagasikara. Ny alatsinainy 28 oktobra 2019 no nampiharany sazy ara-bola ny orinasa Logistique Pétrolière, Total ary Vivo (Shell) izay voatondro ho fototr’ireny fikorontanan’ny famatsiana solika nampisavorovoro teto Antananarivo Renivohitra ireny. Fanapahan-kevitra izay mety novidiany lafo, hoy ny mpamakafaka politika.
Tahirimbolam-panjakana: Mandray ny toerany ny Tale Jeneraly vaovao, Ranjalahy Ihajambolatiana
Jirama: Nanao fanamby telo ny Tale Jeneraly vaovao Andriamanga Vonjy »